Onye isi ala Sarı Arifiye Karasu jụrụ Ankara maka Nkwado maka Ọdụ | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara54 SakaryaOnye isi ala Sarı Arifiye Karasu na-arịọ Ankara Nkwado maka ilgbọ njem
11 / 12 / 2019 54 Sakarya, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Karasu Mayor İshak Sarı, n'oge nleta ya na Ankara Arifiye Karasu rịọrọ maka nkwado maka ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Mazi Sar met zutere maka ọmụmụ ngbanwe obodo
Karasu Mayor İshak Sarı gara n'ihu na ọbịbịa ya na Ankara na-enweghị oge ọ bụla na Onye isi obodo Mayor Hilmi Erbatan so ya. Yalçın zutere Eyigün. Mgbe nzukọ a, Karasu ụzọ ụgbọ, Karasu, ọnọdụ nrụrụ aka nke mebiri emebi ka oge na-aga, tụlere ihe metụtara njem na akụrụngwa na mpaghara ahụ.
“Razọ ụgbọ okporo ụzọ ka e doro Mas
Onye isi ala İshak Sarı gara n'ihu na Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa gaa Ankara na Ankara. N'oge nzukọ ahụ, a tụlere njem njem na akụrụngwa nke Karasu. Isi okwu nke nzukọ ahụ bụ ahịrị Railway Karasu Arifiye, onye ụlọ bidoro mana enweghị ike iru ya n'ihi ọtụtụ ebumnuche. Ministri nke Ingbọ njem na akụrụngwa onye isi nke ihe owuwu Yalçın Eyigün zutere Onye isi ala İshak Sarı, Yalçın Eyigün nyere ozi banyere ọrụ ndị metụtara Karasu ma rịọ maka nkwado karịsịa maka ọrụ ụgbọ okporo ígwè ga-enweta na mpaghara ahụ.
Sıcak na kọntaktị na-ekpo ọkụ anyị na Ankara gara n'ihu, Kar kwuru, onye isi obodo Karasu İshak Sarı, "Anyị na-agba mbọ imezu uche nke ụmụ amaala anyị". Onye isi ala Sarı kwuru nkwupụta banyere mkparịta ụka ndị Ankara; Anyị na-aga eleta Ankara. Taa, osote Mayor Hilmi Erbatan ya na onye isi ọhụụ nke ofgbọ njem na akụrụngwa nke nchekwa. Anyị haziri nleta na Yalçın Eyigün. Anyị gosipụtara ọrụ ngozi a kwadebere maka njem dị na mpaghara anyị ma rịọ maka nkwado ha maka eriri okporo ụzọ a na-emepebeghị n'ihi nsogbu dị iche iche. Ekwere m na anyị ewerela oke ọrụ dị mkpa maka mpaghara anyị. Anyị ga na-arụ ọrụ na-agwụ ike ruo mgbe anyị ruru Karasu ruo n'ókè o kwesịrị. Transportgbọ njem, agụmakwụkwọ, njem, ọrụ na akụrụngwa, a ga-emejupụta ọtụtụ ọrụ anyị otu otu, mmepe na mgbanwe na mpaghara anyị ga-agba onye ọ bụla àmà. ”
President Atilla na-arịọ ka enyemaka site n'aka Arslan wee buru ụgbọ okporo ígwè ahụ n'ala
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè jụọ MHP Semih Yalçın maka Nkwado
Ụgbọ njem Minista Binali Yildirim na-ekwu okwu nkenke banyere ebe obibi Arwayye-Karasu
Ihe mere Arifiye-Karasu anaghị enyocha ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Ottoman chebere okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Arifiye - Karasu na 1830 afọ
Başaranhıncal Iwu na-agba ume na ịrịọ maka Nkwado Maka Rail
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè ndị na-eji ụgbọ okporo ígwè rịọ ya ka ha nye gị nkwado n'aka Union
President Atọ Budak Matsodan rịọrọ maka nkwado maka ụgbọ oloko dị elu
Mayor nke Tarsus nwere ike ịrịọ Nkwado maka Ọdịdị Dị Elu
Karaosmanoğlu na-arịọ onyeisi oche maka Nkwado maka Ikike Metro Project
Ndị oru ngo na-arịọ nkwado site n'aka Minista maka ụlọ ọrụ Kocaeli Metro
Mayor Yilmaz Istedi, Dur Samsunspor Kwụsị aha nke ọdụ ụgbọ ahụ
President nke ngwa ngwa nyere ntụziaka
Ọfọn, Narlıdere Metro jụrụ maka ọkwa si Prime Minista
Mayor Aydın Na-akwado Tüdemsaş Project
Arifiye-Karasu okporo ụzọ
Karasu Arifiye Railway